राष्ट्रपति सडकमा होइन, संविधानमा मात्रै भेटिऊन् : गगन थापा - Raptinews - Raptinews राष्ट्रपति सडकमा होइन, संविधानमा मात्रै भेटिऊन् : गगन थापा - Raptinews
राष्ट्रपति सडकमा होइन, संविधानमा मात्रै भेटिऊन् : गगन थापा
नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता हुन्, गगन थापा । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ बाट दोस्रोपटक निर्वाचित हुँदै सांसद् बनेका थापा संसद्मा सरकारविरुद्ध खरो रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन् । संसद्मा प्रतिपक्षका रुपमा कांग्रेसको इज्जत उनै थापाले धानिदिएका छन् । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएपछि उनले संसद्मा सोबारे कडा प्रतिक्रिया जनाइसकेका छन् । अघिल्लो वर्ष नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा कांग्रेसले त्यसमाथिको छलफलमा कमजोरी गरेको स्वीकार्ने थापा भोलिबाट हुने छलफलमा कांग्रेस सशक्त रुपमा प्रस्तुत हुने बताउँछन् । कांग्रेस सांसद् उनै थापासँग सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानी :
पहिलो कुरा, नीति तथा कार्यक्रम भन्ने अवधारणमाथि नै मेरो वर्षौदेखि प्रश्न रह्यो । तर, त्यसलाई बदल्न सकिएन । यो किन ल्याएको ? नीति र कार्यक्रमबीचको फरक के हो ? नीतिलाई कसरी राख्ने हो, कार्यक्रमलाई कसरी राख्ने हो ? यसको निर्माण कसरी हुन्छ ? यसलाई संगठित कसरी गर्छौ ? प्रस्तुत कसरी गर्छौ ? यही ढर्रा किन चाहिने ? भन्ने कुरा गर्दै आएको हो । त्यसमा नयाँपन ल्याउनका लागि यो सरकारलाई जस्तो अनुकूल कसैलाई पनि थिएन, त्यो गरेन । यसले पहिलेदेखि गर्दै आएको कुरासँग राखेर हेरौं । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा के के सोच्छ त ? सबैभन्दा माथि त संविधान छ । नेपाल सरकार सन् २०३० सम्मको दीर्घकालीन लक्ष्यसँग बाँधिएको छ । १५औं आवधिक योजना ल्याएको छ , त्यसलाई हेर्छ । पाँच वर्षका लागि निर्वाचित भएर आएको छ, १ वर्ष बितायो । उसलाई मार्गदर्शन गर्ने उसको घोषणापत्र छ । गएको १०/१५ वर्षलाई हेर्दा यो यस्तो पहिलो सरकार हो जसको प्रधानमन्त्रीले अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो । आज गर्दै हुनुहुन्छ । अर्को वर्ष गर्ने कुरा पनि शतप्रतिशत सुनिश्चित छ । यो भन्दा पहिला कस्तो हुन्थ्यो ? सुशील कोइरालाको सरकारलाई हेरौं । अघिल्लो वर्ष नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो । दोस्रो वर्षको प्रस्तुत गर्दा उहाँलाई तेस्रो वर्ष प्रस्तुत गर्न पाउँदिन भन्ने थाहा थियो । अहिलेको सरकार त त्यस्तो होइन ।
यसमा चैं के हो भने सरकारको प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले के सोच्नुहुन्छ, के बोल्नुहुन्छ भन्ने कुराले धेरै अर्थ राखे जस्तै प्रतिपक्षमा पनि त प्रमुख नेता, हाम्रो पार्टी सभापति, दलको नेताले भोलि पार्लियामेन्टमा एर नीति तथा कार्यक्रममा विषयवस्तुलाई ठिक ढंगले उठाउनुभयो, उहाँले दिएको क्युलाई हामीले फलो गर्यौं भने हुने हो । अपोजिसनको लिडर भइसकेपछि उहाँमा त्यो कुरा खोज्छ, त्यो स्वाभाविक हो । नेताले त्यसलाई ठिकठाक ढंगले गर्न सक्यो भने अपोजिसनको रोल सही हुन्छ ।गर्न सकेन भने हुँदैन ।
कर्मचारीमा आफ्नै नाम राखेर चार जनाकाे तलब बुझ्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष
इजरायलमा तनाव : सेनाको आक्रमणबाट १४ महिने शिशुसहित ४ को मृत्यु
आज श्रीपञ्चमी, विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गरिदैं
दाङमा८ जना कोरोना संक्रमित थपिए